Faa'iidooyinka feerka, maxay yihiin? | Ragga Stylish
Faa'iidooyinka feerka waxaa laga dareemaa jirka iyo maskaxda labadaba. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira habab badan oo casri ah oo qaab lagu qaabeeyo loona riixo jirka xadka, laakiin feerka (xiisaha leh, mid ka mid ah farsamooyinka ugu da'da weyn) ayaa mar kale ka mid noqday xulashooyinka ugu waaweyn.
Miyuu feerkaasi ilaaliyaa soo jiidashada dugsiga hore, halka marka la eego natiijooyinka ay sidoo kale ka badan tahay dhererka wakhtiyada. Feerku maahan oo kaliya cayaar qurux badan, waxaa sidoo kale loo arkaa tababar guud..
1 Feerku wuxuu shaqeeyaa jirka iyo maskaxda
2 Sababaha loogu deeqo galoofisyada
3 Sidee ayuu yahay tababarka feedhyahan?
4 Anshaxa ku jira DNA
Feerku wuxuu shaqeeyaa jirka iyo maskaxda
Si laga bilaabo, Feerku wuxuu gubaa dufan badan, waana sababta ay fikrad fiican u tahay haddii aad u baahan tahay inaad miisaankaaga dhinto. Intaas waxaa sii dheer, waxay xoojineysaa muruqyada waxayna kordhisaa adkeysiga, taasoo u oggolaaneysa dadka ku dhaqma inay si dhakhso leh qaab u helaan oo ay gaaraan awood jireed oo weyn. Haatanna HIIT waa sidaas oo kale, waa in la ogaadaa in feerka uu sidoo kale yahay tababar jimicsi oo wax ku ool ah.
Laakiin feerku ma aha oo kaliya faa'iidooyinka jirka, laakiin sidoo kale faa'iidooyinka maskaxda, taas oo ka dhigaysa xitaa jimicsi dhameystiran. Dhinaca daweynta, gargaarka ku dhaca garaacista boorsada adag ee fekerka ayaa walwalka badanaa la muujiyaa. Waana gebi ahaanba run. Laakiin ha ilaawin in faa'iidooyinka feerka ay sidoo kale ku jiraan kalsooni koror iyo isku kalsooni. Feedhka ayaa kaa dhigaya muuqaal iyo wanaag. Muruqyadaadu waxay helayaan qadar macaan oo qeexitaan iyo xatooyo ah. Maskaxdu sidoo kale way soo baxdaa iyada oo la xoojiyay. Shaki kuma jiro in xirfadaha is-difaaca ee la helay ay door muhiim ah ka ciyaaraan faa'iidadan.
Sababaha loogu deeqo galoofisyada
Majiro wax tababar ah oo kugu kallifay ilaa hadda? Xaaladdaas oo kale cayaaraha halyeeyada sida Muxamed Cali ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee sidaas sameeya. Dhinaca dhiirigelinta, feerka ayaa kugu xujeeya oo kugu riixaya inaad naftaada horumariso si aad xirfadahaaga u xajiso. Kuwo badan ayaa rumeysan inuu ku sameeyo geesinimo ka badan cayaaraha kale, laakiin taasi waa arrin doorbid shaqsiyeed.
Maaha fursad jaanis in filimada feerka ('Wild Bull', 'The Fighter' ama taxanaha dheer ee 'Rocky') ay yihiin kuwa ugu xiisaha badan ciyaaraha iyo guud ahaan noocyada xiisaha leh. Marka la eego shineemada, muddooyinkii ugu dambeeyay waxay door muhiim ah ka ciyaartay isu soo dhaweynta isboortiga jiilalka cusub iyada oo loo marayo 'Creed' (2015), 'Redemption' (2015), 'Manos de piedra' (2016) iyo 'Allabarigii halyeeyga (2016).
Aan aragno dhammaan faa'iidooyinka feerka:
Wuxuu xoojiyaa dhamaan muruqyada jirka. Waana in xoog lagu garaaco qaybta sare ee jidhka (gacmaha, dhabarka, laabta) waa lagama maarmaan sida qaybta hoose (barida, lugaha).
Dhis kalsooni iyo nabadgelyo
Hagaaji jawaab celinta
Sidee ayuu yahay tababarka feedhyahan?
Caadi ahaan, astaamo badan oo tababarku waxay kuxiranyihiin hadday yihiin feeryahannada shaqsiyeed heer xirfadeed iyo inkale. Laakiin si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira khadad guud oo kaa caawin kara inaad hesho fikrad qallafsan oo qallafsan. Tababbarka feeryahannadu sida caadiga ah wuxuu bilaabmaa aroortii hore (ama galabtii haddii aad doorbideyso inaad tababar sameysid fiidkii) iyadoo orod la gelinayo muruqyada.. Horeba inta udhaxeysa darbiyada jimicsiga, waa leexinta xariga boodboodka si aad si fiican u hagaajiso cagaha iyo isuduwidda udhaxeysa gacmahaaga iyo lugahaaga. Fasallada feerka ayaa sidoo kale ku jira jimicsiyo miisaanka jirka ah sida riixitaanno, fadhiisinno, iyo burpees.
Waxaa la gaadhay waqtigii la gashan lahaa galoofyadaada. Qeybtaan jimicsiyo kala duwan ayaa loo isticmaalaa: Shaashad-ka-ciyaarista (qeybta caanka ah ee tababarka ee feeryahanku ku siinayo isku-darka feerka hawada), mittens, ku-celcelinta isboorti (lamaanaha tababarka) ... iyo dabcan laylisyada Pere iyo bacda feerka. Ujeeddadeedu waa in la hagaajiyo dhinacyada sida farsamada, xoogga ama xawaaraha garaacista. Sidoo kale jawaab celin iyo go'aan qaadashada giraanta. Marka la soo koobo, waxaa lagaa dhigayaa dagaalyahan ka wanaagsan kan ugu sarreeyana, orodyahan ka awood badan.
Anshaxa ku jira DNA
Mararka qaarkood, laga bilaabo tababbarka ugu horreeya, waxaad leedahay dareen qancinaya oo ah inaad heshay hibo xiriir isboorti oo illaa iyo xilligaas qarsoonaa. Xaaladaha kale, barashada feerka waxay qaadataa waqti badan. Samir u yeelo sida sadaqeyn iyo sadaqeyn labaduba waxay kujiraan DNA-da edbintan. Waxaan rajeyneynaa, inay iyaguna kugu dambeyn doonaan adiga.
Guud ahaan, wuxuu tababbaraa 3-4 jeer usbuucii. Xirfadlayaashu si dabiici ah ayey u sameeyaan marar badan maadaama ay tahay qaab nololeedkooda. Looma baahna in la xasuusto in saacadaha badan ee usbuucii ee aad u hurto, sida ugu dhakhsaha badan uguna cajiibka badan horumarkaagu uu noqon doono. Dhanka kale, sida jimicsiyada oo dhan, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato maalmo nasasho. Dhageysiga jirkaaga waa hab fiican oo lagu ogaado goorta ay tahay waqtiga ugu fiican ee fasax la qaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa’iidooyinka feedhka
Khiyaanooyinka isku dhafka dharka ragga